Profil amin'ny orinasa - Genzon
Fampitaovana Novelon Genzon
Niorina tamin'ny taona 2017, Shuyang Genzen Novel Materials Co, Ltd (etsy aloha voatonona hoe "GENZON Novel Materials") dia eo ambany fifehezana ny GROUP GENZON izay mikarakara ny fitantanana azy sy ny asany.
Genzon Novel Material dia orinasa avo lenta amin'ny sehatry ny fitaovana polymer, mampiditra ny R&D vokatra, famokarana sy varotra miaraka amina vokatra sy sokajy feno. Ny sarimihetsika polyester mahaleo tena sy novokarin'ilay orinasa dia azo ampiasaina betsaka amin'ny sehatry ny indostria isan-karazany toy ny fantsom-bolaka aluminium, ny fanaovana pirinty, ny fiarovana ny karatra, ny famafazana, ny famoahana, ny volamena sy volafotsy tariby, sarimihetsika kink, tsy ahodin-drano, sns. mikasa ny hanitatra ny fampiharana ny fitaovana polyester azo tsapain-tanana. Amin'izao fotoana izao, ny orinasa dia manana tsipika famokarana polyester 18000 taonina, 4 ny alemanina donier mivantana mihetsika ny tsipika famokarana horonantsary tensile biaxial ary 1 andrana fitsapana an-trano. Manana ny famokarana sy ny fametrahana R&D any Jiangsu sy ny toerana hafa.
Amin'ny ho avy, hiorina amin'ny fomba fijery iraisam-pirenena ny Genzon Novel Material hananganana marika Shinoa ary hiezaka ny ho lasa mpitarika eo amin'ny indostrian'ny akora vaovao amin'ny alàlan'ny fanamafisana ireo tombony efa misy, fanamafisana ny fanavaozana tsy miankina, ary famolavolana fitaovana vaovao madio sy madio.
Genzon Investment Group Co., Ltd. (ny "Genzon") dia naorina tamin'ny Desambra 2003. Miaraka amin'ny lapan'ny foibeny ao Shenzhen, manana mpiasa mihoatra ny 5000 i Genzon manerana ny firenena. Toerana maha mpamatsy serivisy ho an'ny indostrian'ny teknolojia avo lenta, i Genzon dia mirotsaka amin'ny fampiasam-bolan'ny indostria, ny fampandrosoana ny trano indostrialy, ny fananganana ary ny asan'ny campus indostrialy, eo amin'ny orinasa hafa.
Manoloana ny famatsiam-bolan'ny indostria dia mamorona amin'ny fivarotam-panafody, fitaovana vaovao ary ny famokarana vy i Genzon miaraka amin'ny fitsipi-pivoarana amin'ny fanomezana alalana avy amin'ny tsena. Ao anatin'izany i Welmetal dia manolo-tena amin'ny famokarana sy ny R&D amin'ny vokatra metaly tsara, raha toa kosa ny Genzon New Material dia mifantoka amin'ny sehatry ny fitaovana polimika. Betsaka koa ny tetikasa renivola maro ao amin'ny portfolio an'ny Genzon. Ho fanajana ny fananganana sy ny fanaovan'ireo tobim-paritra indostria, dia mifantoka amin'ny orinasany any Greater Bay Area i Genzon, ary tompony samirery sy miasa amina tobim-piasana maromaro.
Nandritra ny folo taona lasa, dia mifikitra amin'ny iraka hamorona tontolo iainana miavaka i Genzon ary manolo-tena ho tonga orinasa mahatoky fahazoana mahatoky. Mba hahatratrarana fotoana hisian'ny fiovana lehibe sy fananganana toe-karena any Shina, dia hamolavola sy hanompo ny indostria avo lenta sy hanomezana fampandrosoana ny indostria amin'ny alalàn'ny birao mahavariana sy ny serivisy ilaina indrindra izy ireo. Genzon Group dia namorona portfolio miaraka amin'ny zaridaina sy mponina. Nandritra ny taona maro dia namolavola kompleks fandraharahana, trano biraon'ny mponina, mponina, trano fandraisam-bahiny sy golf, ary nahazo tombony sy traikefa amin'ny fampandrosoana ny indostria sy ny fitantanana ny fananana.
TEKNOLOGY RESEPIKO sy FAMPITARISANA
Vondrona vondrona R&D fototra, tarihin'ny dokotera iray nianatra tany Amerika, no napetraka tao amin'ny Lohasahan'i Silicon mba hisintona ny teknolojia nitarika izao tontolo izao
Ny fototry ny fitsapana horonantsary momba ny fambolena avo lenta dia manampy ny fanavaozana ataontsika ao anaty famokarana, fandalinana ary fikarohana
Ny teknolojia synthesis polyester manala baraka, hetsika manerantany tsy manam-paharoa sy ny teknolojia voarindra miaraka amin'ny fanomezan-dàlana ireo faritra 15 anisan'izany i Sina, Etazonia, Eropa, Japon ary Taiwan
Ny fankatoavan'ny tetik'asa ny valin'ny fikarohana momba ny fandroboroboana ny faritany Jiangsu tamin'ny 2014
Ny loka faharoa amin'ny famaranana ny fifaninanana famokarana enti-manovo sy orinasa mpandraharaha an'i China - Fototry ny Novel amin'ny taona 2014
Manana ekipa matihanina sy za-draharaha sy mahomby isika hampandrosoana ny fampandrosoana haingana sy maharitra ny GENZON Novel Material amin'ny lafiny fikarohana momba ny teknolojia sy fampandrosoana, famokarana, fanaraha-maso kalitao, fitantanana marketing ary fitantanana orinasa ary fitantanana.
Ny vokatra isan-taona dia 180.000 taonina ao amin'ny orinasa 110,000m2
Efatra famokarana sary an-tsary Dornir efatra ary tsipika fanamboarana trano vita amin'ny trano iray
Atrikasa eo ambany fitantanana manara-penitra 6S